Nhau - 37 Ton Container parutivi anosimudza anotumirwa kuKenya
Ino inguva yekutanga mutengi wedu weKenya kutenga 37ton mudziyo padivi anosimudza kubva CCMIE, uye mutengi achiri kuvimba CCMIE zvakanyanya. Wedu wekutengesa maneja akangogadzira yakadzama kota kuti mutengi asarudze kubva, uye zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, isu tinokurudzira akakodzera kwazvo mudziyo padivi anosimudza kwaari.
Ehezve, mushure mekutumira iyo kudhirowa kumutengi kunongedzera, mutengi akaita gadziridzo dzakanaka. Nekuti mutengi aive atenga iyo yekumashure ino uploader tirera kubva kune vamwe vanotengesa kare. Kana mutengi wedivi anotakura karailer ikakundikana kushanda zvakajairika, mutengesi haana kumubatsira kuigadzirisa uye akafuratira mutengi. Izvi zvinotsamwisa mutengi. Saka vatengi vane hanya zvakanyanya nezvese-yekutengesa sevhisi uye nenyaya dzehunhu. Isu tinonzwisisa zvinonetsa zvevatengi vedu chaizvo. Isu tinozivisa vatengi vedu kuti isu tine yakazara kwazvo mushure-yekutengesa system.
Vedu-vekutengesa vashandi vanopindura mibvunzo yako pamhepo maawa makumi maviri nemana pazuva. Kune mavhidhiyo akazara uye emanyoro ekukubatsira iwe kushanda, uye isu tinopa vatengi nevamwe evatengi 'mashandiro emavhidhiyo. Saka usatombo kunetseka nezve mushure-kutengesa matambudziko. Isu tinogadziriswa nechikwata chehunyanzvi.
CCMIE Container yega-inorodha rori inoshandiswa kurodha uye kudzikisa Container.
CCMIE Container padivi loader chengetedza zvakawanda zvakanaka, chinja nyanzvi, yakaderera tare huremu
Kubudirira kwepamusoro, sarudzo dzakasimudzwa dzepamberi, Kumanikidza kwepasi pasi & kugadzikana kwepamusoro
Ngoro kana rori yakaiswa.
Tine chokwadi chekuti mushure mekushandurana kwedu kwekutanga, pamwe nekubatana kwakatevera, kuburikidza nekubatana kwedu, kudyidzana kwebhizinesi pakati pedu kunounza mabhenefiti kumakambani edu ese, kubatsirana nekubatsirana. Isu, CCMIE, tinogona kukupa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa kana masevhisi, uye nekupa China ye3-axis Container Loader Truck Trailer mumishini mitsva muPapua, Solomon Islands nedzimwe nyika nemutengo wemakwikwi. Isu tanga tichitarisira nemoyo wese kushandira pamwe nevashambadzi nevashandisi munyika yese. . Isu tinofunga isu tinogona kusangana nezvako zvinhu zvekushandisa. Isu tinogamuchirawo neushamwari vatengi kuchikwata chedu chekugadzira kuti titenge mhinduro dzedu.
Kana iwe uchifarirawo, unogona kutibata！